Hababka Buugga | Hal-abuurka Online
Ma leedahay eCommerce ama ma waxaad u baahan tahay inaad alaabtaada ku soo bandhigto buug-tusaale oo aanad garanayn sida loo dhiso? Ma ogtahay in ay jiraan habab buugageedka? Haa waa sidaas! Haddii aad leedahay dukaanka internetka oo aad u baahan tahay inaad bixiso muuqaal xirfad leh sababtoo ah waxaad rabtaa inaad noqoto qaybiyaha alaabtaada ee dukaamada kale ee maxaliga ah iyo ganacsiyada, markaa waa inaad heshaa buug-gacmeed wanaagsan oo muujinaya xirfaddaada.
Laakiin sida loo sameeyo? Meel eber ah? Maya, qaababka buugaagta waxaa laga heli karaa internetka. Taasina waa ta aan ka hadli doono marka xigta. Ma aha oo kaliya inaan kuu sheegi doono sababta ay muhiim u tahay in la helo buug-gacmeed wanaagsan, laakiin waxaan ku siin doonaa agab si aad u sameyso daqiiqado ama saacado gudahood haddii aad hayso wax badan oo aad ku dhejiso.
1 Waa maxay buug-yaraha, maxaa loogu talagalay iyo maxay muhiim u tahay?
2 Qaababka Buugaagta ugu Fiican
2.1 Buugaagta dhismaha
2.2 Hababka buugaagta ee alaabta
2.3 Buugaagta Fashion-ka
2.4 Nashqada liiska ugu yar
2.5 Nashqada buugaagta ee faylalka galmoodka
2.6 Nashqada wax soo saarka guud
2.7 Buug-yaraha Alaabooyinka Ururinta
2.8 Hababka buug-gacmeedka ee sawir qaadayaasha, sawir-qaadayaasha, qorayaasha
2.9 Qaabka buug-yaraha ee makhaayadaha
Waa maxay buug-yaraha, maxaa loogu talagalay iyo maxay muhiim u tahay?
Buug-yarahaagu waa dukumeenti, kaas oo noqon kara mid jireed ama muuqaal ah, kaas oo taxane ah oo alaabooyin leh sifooyinkooda lagu soo bandhigay. Waxaa jira noocyo badan oo buug-yaraha ah, laga bilaabo kuwa kor u qaadaya sawirka si uu "indhaha uga soo galo" ilaa kuwa liiska alaabta iyo qiimahooda.
Isticmaalkeeda dhabta ah waa mid aad u kala duwan. Tusaale ahaan, buug-yaraha waxaa laga yaabaa inuu yahay mid leh dukaan raashin ah oo aad ka dalban karto badeecooyin ka badan inta uu inta badan keeno, wuxuuna ku siinayaa liiska alaabta. Ama waxa ay noqon kartaa gawaadhida cuntada sida (sida badan la qaboojiyey) kuwaas oo sita buug-yaraha si loogu dalbo si waafaqsan lambarka tixraaca (ama sida ku cad sawirka la socda alaabta).
Buugga had iyo jeer waxay koobeysaa xulasho badeecado ah oo lagu suuqgeyn doono Oo waa wax weli isbeddelaya maaddaama ay tahay hab la isugu keeno waxa la iibiyo (marka laga hadlayo dukaamada internetka waxay u oggolaaneysaa inay la xiriirto iibinta alaabada internetka ee "adiga adiga").
Hadda, muxuu buug-gacmeedku aad muhiim ugu yahay? Aan tusaale usoo qaadano. Ka soo qaad inaad tahay naqshadeeye garaafeed oo aad go'aansatey inaad furto dukaan leh sawiradaada. Dhammaantood waxaad ku haysaa internetka, laakiin si lama filaan ah dukaan xaafaddaada ku yaal ayaa kula soo xidhiidhaya oo ku waydiinaya inaad u soo dirto buug-gacmeedka alaabtaada sababtoo ah waxay jeclaan lahaayeen inay arkaan wax kasta oo aad haysato. Ma waxaad u sheegaysaa inuu bogga soo galo oo u wareeg si aad u aragto? Taasi uma eka mid xirfad leh.
Dhanka kale, haddii aad haysato buug-yaraha badeecada, halkaasoo badeecadda iyo qiimaha lagu muujiyey, miyayna kula ahayn inay si fiican u soo bandhigi lahaayeen? Sidan ayaad u siinaysaa shay jidheed oo uu ka daalacan karo isaga oo aan u baahnayn internet, mobaylo iyo kombuyuutar.
Muhiimadda buuggu waxa ay ku jirtaa in waxa aan la taaban karin laga dhigo “la taaban karo”. Ma raaci kartid dhammaan alaabooyinka dukaamada, sababtoo ah ma heli doontid meel bannaan. Laakiin buuggu wuxuu kaa caawinayaa inaad bixiso muunad wax kasta oo aad siin karto shirkaddaas, kuwa iskii u shaqeysta ama shakhsi ahaan, si ay u go'aansadaan waxay iibsanayaan.
Qaababka Buugaagta ugu Fiican
Haddii aad tahay naqshadeeye garaaf, milkiilaha eCommerce, ganacsade, madax-bannaani ..., Haddii aad haysato badeecooyin aad iibinayso, waxaad u baahan tahay buug-yarahaaga. Oo mar haddii aanan doonayn in aad ka soo bilowdo xoq, ka waran in aad isku daydo hab-buugaagta?
Halkan waxaan ku soo uruurinay xulashooyinkooda.
Halkan waxaan ku soo bandhigaynaa qaar Qaababka buug-gacmeedka, in kasta oo sidoo kale loo isticmaali karo ijaarka ama iibinta guryaha.
Inkasta oo priori laga yaabo inaad u malaynayso in ay kaliya u shaqeyso taas, runta ayaa ah in marka aad gudaha ku jirto, sida aad dib u soo celin karto, mar walba waxaad heleysaa adeeg kale.
Hababka buugaagta ee alaabta
Bakhaar ma leedahay mise waxaa lagaa codsaday inaad samayso buug-gacmeedka alaabta? Hagaag, halkii aad ka bilaabi lahayd xoqan, halkan waxaad ku heli kartaa qaabyaal buugeed oo aad u baahan tahay oo kaliya sawiro, beddel sharaxaadda, cinwaanada iyo qiimaha, oo waxaad ku dhamayn doontaa shaqada si degdeg ah.
Haddii shaqada ay tahay inaad qabato, ama waxaad samaynayso ay tahay moodada, halkan waa mid kaas, Inkasta oo sawiradu yihiin waxa ugu muhiimsan, waxaa sidoo kale jira meel qoraal ah si loo sharaxo ama xitaa loo dhigo qiimaha.
Nashqada liiska ugu yar
Xaaladdan oo kale waxaad haysataa buug-yaraha u socda waxa taga, tus alaabta. Si kastaba ha ahaatee, way sameyneysaa kor u qaadida sawirka guud ka dibna sawirro yaryar oo alaab ah, oo leh sifooyinkooda iyo qiimahooda.
Nashqada buugaagta ee faylalka galmoodka
Ma xasuusataa kiiskii aan hore u soo sheegnay ee ku saabsan sawir-qaade? Waxa caadiga ah waa in aad haysato faylal leh naqshadaha ugu fiican, laakiin ka waran haddii aad leedahay dukaan? Hagaag, waxaad u baahan doontaa qaar ka mid ah qaababka buugaagta si aad u tusto waxaad iibiso.
Halkan waxaa tusaale u ah, meesha laga raadinayo taas U adeega sida faylalka iyo sidoo kale buug-yaraha, oo leh sawirro tayo sare leh oo aad u fudud in wax laga beddelo.
Nashqada wax soo saarka guud
Haddii aad haysato badeecooyin badan oo guud ah, ama isticmaalaya sawir isku mid ah laakiin leh midabyo kala duwan, tani waxay noqon kartaa qaab-dhismeedka aad raadineysay.
Iyada Alaabooyinka waa liis gareyn laakiin leh sawirro iyo midabyo la heli karo. Waxa kale oo aad haysaa sawiro waaweyn iyo/ama yar yar oo agtiisa ah haddii aad rabto inaad muujiso xaqa iyo gadaal ama labada dhinac ee alaabta.
Waxaad ka soo dejisanaysaa Halkan.
Buug-yaraha Alaabooyinka Ururinta
Haddii waxa aad raadinayso Ma aha oo kaliya in la muujiyo alaabta, laakiin sidoo kale in la siiyo qaar ka mid ah nuxurka (sheekadu waxay ku jirtaa moodada wayna sii ahaan doontaa), markaa waa inaad ku sharataa tan.
Kani waa buug-tusaale muujinaya dhawr shay, laakiin ka tagaya meelo badan oo qoraal ah oo aan aad u qasin xaashida.
Hababka buug-gacmeedka ee sawir qaadayaasha, sawir-qaadayaasha, qorayaasha
Tani waa mid ka mid ah qaababka buugaagta ee aan ugu jecelnahay kooxdan, sababtoo ah inkastoo sawiro lagu dhejiyo, waxaa laga yaabaa in qoraalka uu yahay midka ugu miisaanka badan. Xitaa haddii ay u muuqato inaysan ahayn, La socda sawirka oo leh ereyo wakiil ah waxay iibin kartaa si aad u wanaagsan.
Qaabka buug-yaraha ee makhaayadaha
Ma inaad u samaysaa buug-yaraha makhaayadaha? Ma jiraan wax dib loo sameeyo, halkan waxaad haysataa template ku adeegi kara, ama taabsiin kara si uu kuugu adeego.
Sida aad arki karto, waxaa jira xulashooyin badan oo laga dooran karo qaab-dhismeedka buug-yaraha. Dabcan, haddii aadan kuwan ka helin midka aad raadineyso, waxaan kugula talineynaa inaad internetka ka hubiso maadaama ay jiraan xulashooyin badan oo badan oo ku imaan kara. Ma rabtaa in aad ku taliso mid aad wax badan isticmaasho?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Tusaalooyinka buugaagta
Isku dhafka lakabyada Photoshop